I-WholesaleSP-H002-yeNdalo yoMbala we-turmeric Extract kunye ne-Curcumin 95% ye-Antibacterial kunye ne-Anti-Inflammatory factory kunye nabavelisi |Spring-Bio
Igama lesiLatini:Curcuma longa L.
Curcumin powder95% Izinyibilikisi ezishiyekileyo＜5000ppm
Umgubo weCurcuminI-95% i-solvents eseleyo <50ppm, i-Ethanol Extraction
I-Curcumin Beadlets Powder enyibilikayo ngamanzi10%
I-Turmeric sisinongo esinika ikheri umbala wayo omthubi.
Isetyenziswe eIndiya kangangamawaka eminyaka njengeziqholo kunye neyeza lonyango.
Kutshanje, isayensi iqalile ukuxhasa oko amaIndiya ebekwazi ixesha elide - ngokwenene iqulethe iikhompawundi ezineempawu zonyango.
Ezi zixhobo zibizwa ngokuba yi-curcuminoids, eyona nto ibaluleke kakhulu yi-curcumin.
I-Curcumin iyona nto iphambili esebenzayo kwi-turmeric.Ineempembelelo ezinamandla zokuchasana nokudumba kwaye i-antioxidant enamandla kakhulu.
Nangona kunjalo, umxholo we-curcumin we-turmeric awukho phezulu.Imalunga ne-3%, ngokobunzima.
Uninzi lwezifundo ezikule mifuno zisebenzisa i-turmeric extracts eziqulethe ubukhulu becala i-curcumin ngokwayo, kunye needosi zihlala zidlula i-1 gram ngosuku.
Kuya kuba nzima kakhulu ukufikelela kula manqanaba usebenzisa nje isiqholo se-turmeric ekutyeni kwakho.
Ngoko ke, ukuba ufuna ukufumana iziphumo ezipheleleyo, kufuneka uthathe isongezelelo esiqulethe ixabiso elibalulekileyo le-curcumin.
Ngelishwa, i-curcumin ayifakwanga kakuhle kwigazi.Inceda ukusebenzisa i-pepper emnyama kunye nayo, equkethe i-piperine, into engokwemvelo eyenza i-curcumin ifakwe kwi-2,000%.
Izongezelelo ezilungileyo ze-curcumin ziqulethe i-piperine, ukwandisa kakhulu ukusebenza kwazo.
I-Curcumin nayo i-fat soluble, ngoko ke ingaba yinto efanelekileyo yokuyithatha kunye nokutya okunamafutha.
1. I-Curcumin yiNdalo ye-Anti-Inflammatory Compound
Ukudumba kubaluleke kakhulu.
Inceda umzimba wakho ukuba ulwe nabahlaseli bamanye amazwe kwaye ikwadlala indima ekulungiseni umonakalo.
Ngaphandle kokudumba, iintsholongwane ezifana neebhaktheriya zinokuwulawula ngokulula umzimba wakho kwaye zikubulale.
Nangona ukudumba okubukhali, okwexeshana elifutshane kuluncedo, kunokuba yingxaki enkulu xa kuthe gqolo kwaye kuhlasela ngokungafanelekanga izicubu zomzimba wakho.
I-Curcumin i-anti-inflammatory kakhulu.Enyanisweni, inamandla kangangokuba ihambelana nokusebenza kwamanye amachiza achasayo, ngaphandle kwemiphumo emibi .Ivimbela i-NF-kB, i-molecule ehamba kwi-nuclei yeeseli zakho kwaye iguqule izakhi zofuzo ezinxulumene nokuvuvukala.I-NF-kB ikholelwa ukuba idlala indima enkulu kwizifo ezininzi ezingapheliyo
2. I-Turmeric inyusa kakhulu amandla oMzimba we-Antioxidant
I-Curcumin yi-antioxidant enamandla enokuthi ithintele i-radicals yamahhala ngenxa yesakhiwo sayo sekhemikhali (15Umthombo othembekileyo, i-16Umthombo othembekileyo) .Ngaphezu koko, i-curcumin iphakamisa umsebenzi we-enzymes ye-antioxidant yomzimba wakho (17, 18, 19Trusted Source). Ngaloo ndlela, i-curcumin inikezela ngenqindi enye-ezimbini ngokuchasene neeradicals zasimahla.Ibathintela ngokuthe ngqo, emva koko ivuselele ukhuseleko lomzimba wakho we-antioxidant.
3. I-Curcumin yomeleza i-Brain-Derived Neurotrophic Factor, iNxulunyaniswe noPhucuko lweNgqondo yoMsebenzi kunye noMngcipheko ongaphantsi weZifo zeBrain.
I-Curcumin yonyusa amanqanaba e-hormone yobuchopho i-BDNF, eyonyusa ukukhula kwee-neuron ezintsha kwaye ilwe neenkqubo ezahlukeneyo zokonakala kwengqondo yakho.
4. I-Curcumin kufuneka ithobe umngcipheko wesifo senhliziyo
I-Curcumin ineempembelelo ezintle kwizinto ezininzi ezaziwa ukuba zidlala indima kwisifo senhliziyo.Iphucula umsebenzi we-endothelium kwaye i-agent enamandla echasayo kunye ne-antioxidant.
5. I-Turmeric inokunceda ukuthintela (kwaye mhlawumbi nokuNyanga) uMhlaza
Umhlaza sisifo esoyikekayo, esibonakaliswa ngokukhula kweeseli ezingalawulekiyo.Zininzi iintlobo zomhlaza, ezinezinto ezininzi ezifanayo.Abanye babo babonakala bechatshazelwa yi-curcumin supplements.
I-Curcumin ifundwe njengemifuno enenzuzo kunyango lomhlaza kwaye ifunyenwe ichaphazela ukukhula komhlaza, ukuphuhliswa kunye nokusasazeka kwinqanaba le-molecular.
Uphononongo lubonise ukuba lunokuba negalelo ekufeni kweeseli ezinomhlaza kunye nokunciphisa i-angiogenesis (ukukhula kwemithambo yegazi emitsha kumathumba) kunye ne-metastasis (ukusasazeka komhlaza)
6. I-Curcumin ingaba luncedo ekukhuseleni nasekuphatheni i-Alzheimer's Disease
I-Curcumin inokuwela umqobo wegazi-ingqondo kwaye ibonakaliswe ukukhokelela ekuphuculeni okuhlukeneyo kwinkqubo ye-pathological ye-Alzheimer's disease.
7. Izigulane zeArthritis ziphendula kakuhle kakhulu kwiiSupplement zeCurcumin
Isifo samathambo sisifo esiqhelekileyo esibonakaliswa kukuvuvukala kwamalungu.Izifundo ezininzi zibonisa ukuba i-curcumin inokunceda ukunyanga iimpawu ze-arthritis kwaye kwezinye iimeko zisebenza ngakumbi kuneziyobisi ezichasayo.
8. Uphononongo lubonisa ukuba i-Curcumin ineeNzuzo eziNgakholelekiyo ngokuchasene noxinzelelo
Uphononongo lwabantu abangama-60 abanokudakumba lubonise ukuba i-curcumin yayisebenza njengeProzac ekudambiseni iimpawu zesimo.
9. I-Curcumin inokuncedisa ukulibazisa ukuguga kunye nokulwa nezifo ezingapheliyo ezinxulumene nobudala
Ukuba i-curcumin inokunceda ngokwenene ukukhusela isifo senhliziyo, umhlaza kunye ne-Alzheimer's, kuya kuba neenzuzo ezicacileyo zokuphila ixesha elide.
Ngenxa yesi sizathu, i-curcumin iye yathandwa kakhulu njenge-anti-aging supplement.
Kodwa ngenxa yokuba i-oxidation kunye nokudumba kukholelwa ukuba kudlala indima ekwaluphaleni, i-curcumin inokuba neziphumo ezihamba ngaphaya kokuthintela izifo.
Ngaphambili: I-SP-H001-Eshushu iThengisa iNkozo yeMdiliya enyulu ngeProanthocyanidin (GSE) 95% yeAnti-Aging and Anti-Wrinkle
Okulandelayo: SP-H003-Natural Green Coffee Bean Extract njenge-Slimming Ingredient Powder ene-Chlorogenic Acid 50% yokunciphisa umzimba
Izibonelelo ze-Turmeric Extract
Iipilisi zeTurmeric Extract
I-Turmeric Extract Curcumin yehlisa uMngcipheko wakho weSifo sentliziyo
I-Turmeric Extract Powder
ICurcumin Piperine Capsules ICurcumin yeTurmeric Astaxanthin Beadlet ICurcumin Astaxanthin Powder Amacwecwe eCurcumin Piperine